2014 NAB ပြပွဲတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သဟဇာတ 2014 NAB Show မှာဆန်းသစ်သော, Flexible အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Multiscreen Solutions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
မီးမောင်းထိုးပြထားသည်အဆိုပါအသံလွှင့်ဗီဒီယို Delivery ဂေဟစနစ်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်မှအလားအလာနှင့်အတူတစ်ဦးသဲနည်းပညာဆန္ဒပြ Include
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား။ â€ "ဖေဖော်ဝါရီလ 27, €â 2014" အဆိုပါ 1210 မှာတဲ SU2014 မှာ NAB ပြရန်, သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT), ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်သည်, ထုတ်လွှင့်အတွက်တန်ဖိုးမြင့်သည်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေပိုကောင်းအောင်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီးရီးကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ပေးဆောင်-TV ကိုများနှင့်အသစ်သောမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ လစာ-TV ကိုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ၏အမှတ် 1 ပံ့ပိုးပေးအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားအပေါ်အဆောက်အအုံ, ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများကိုထုတ်လွှင့်, IPTV headends နှင့် multiscreen transcoding ဖြေရှင်းနည်းများ, သဟဇာတ မဆိုကြည့်ရှုကိရိယာအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ပို့ဆောင်မှုအတွက်နောက်ထပ်ထိရောက်စွာကို enable ပြုလုပ်ဆန်းသစ်အသစ်ကဖြေရှင်းချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်စုံကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။
"ဟုအဆိုပါ 2014 စဉ်အတွင်း NAB ပြရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲမှာသရုပ်ပြသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာ, ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုနှင့်အော်ပရေတာတစ်ဦးထံမှဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ရန်နိုငျသောအံ့သြဖွယ်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် သဟဇာတ"ပတေရုသအလက်ဇန္ဒားမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိတစ်ဦးကဆိုသည် သဟဇာတ။ "လုပ်ဘူးသောကောင်းချီးထုတ်ကုန်များအပြင် သဟဇာတ ဗီဒီယိုကဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, ငါတို့သိဗီဒီယိုဖြန့်ဝေ၏သဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲပါဝါနဲ့ဆန်းသစ်သစ်ကိုဖြေရှင်းချက် feature ပါလိမ့်မယ်။ "
မှာမီးမောင်းထိုးပြထားသည် သဟဇာတ တဲများပါဝင်ပါလိမ့်မယ်:
encoding မြားနှငျ့ Stream ထုတ်ယူခြင်း
သဟဇာတ ယင်းထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုဖြန့်ဝေဂေဟစနစ်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်တဲ့ groundbreaking software ကိုနည်းပညာမိတ်ဆက်နှင့်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းထူးခြားတဲ့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 4K မည်ဖြစ်သည် က Ultra HD 2160p60 သရုပ်ပြ။
အဆိုပါပေါ်တွင်တည်ဆောက်မယ့်အစွမ်းထက်မူလတန်းဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သောဈေးကွက်-ဦးဆောင် ATSC 3.0-အဆင်သင့်Electraâ "ဟုအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆအသံ encoding ကစွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်ထားတဲ့ universal ဘက်စုံသုံး, multiformat encoding ကပလက်ဖောင်း, ¢, display ပေါ်မှာဖွစျလိမျ့မညျ သဟဇာတ IRD (ဘက်ပေါင်းစုံလက်ခံ-ဒီကုဒ်ဒါ) ¢ "ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အသစ်တခုProViewâ¢" DMSâ။
သဟဇာတ ထို့အပြင် ProMedia leverages ရာသည်၎င်း၏အဆင့်မြင့် multiscreen ကြော်ငြာသွင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်® မိသားစုနှင့် ProStream® ACE အားတွေနဲ့® ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် multiscreen transcoder နှင့် multiscreen န်ဆောင်မှုများ၏ငွေရှာခြင်းအတွက် enable လုပ်ဖို့ကြော်ငြာဂေဟစနစ်မိတ်ဖက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး။ client ကိုဘက်မှာအစီအစဉ်ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်အတူစီးပွားဖြစ်သွင်းလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းအားဖြင့်, အ သဟဇာတ ဖြေရှင်းချက်အော်ပရေတာကသူတို့ multiscreen ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦးအပြန် generate တစ်ရိုးနှင့်အကုန်ကျ-ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးတော်မူ၏။
သဟဇာတ "ဟုအဆိုပါ Spectrum ChannelPortâအပါအဝင်, မီဒီယာဆာဗာကိုကုန်ပစ္စည်းလိုင်း¢" စျေးကွက်-ဦးဆောင်Spectrumâမှတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်ဘက်ပေါင်းစုံရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်ကိုစားသုံးမိပါတိုးပွားပေးသောစနစ်,, သိမ်းဆည်းခြင်း, နှင့်ပလေးအောက်ကိုထုတ်လွှင့် Workflows ¢။ ChannelPort ရဲ့အထင်ကြီးစွမ်းဆောင်မှုလေး SD က high-သိပ်သည်းဆပလေးအောက်ပါဝင်သည် /HD ru နှုန်းလိုင်းများ, Dual DVE စွမ်းရည်ကို၎င်း, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်အလိုအလျောက်စနစ်များနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု။ ယင်း၏ high-performance ကိုသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသရုပ်ပြခုနှစ်, သဟဇာတ ထို့အပြင်အပေါ်ပူးပေါင်းတည်းဖြတ်ရေးနှင့် 4K တည်းဖြတ်ရေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သဟဇာတ MediaGrid သိုလှောင်မှုစနစ်အမျှဝေပေးတယ်။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲများအပြင်နှင့် က Ultra HD မှာပြဇာတ်ရုံတင်ပြချက်များ သဟဇာတ တဲ, Thierry Fautier မှာဖြေရှင်းချက်စျေးကွက်၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သဟဇာတ"ကသူ့စက္ကူကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်က Ultra HD တစ်ဦးကရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလားအားသုံးသပ်ခြင်း, "2014 ကနေဧပြီလ9အပေါ် NAB အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာညီလာခံမှာ: 10 အတွက် 30 မှ 11 ဟာ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာအခန်းတစ်ခန်း S228 အတွက်ဖြစ်၏။
သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ထွန်းသစ်စရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများအတွက်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှု-အဆင်သင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထိထိရောက်ရောက်ဖန်တီး ပြင်ဆင်. , ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသစ်မီဒီယာကဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းထူးခြားန်ဆောင်မှုကိုကယ်နှုတ်သောအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.harmonicinc.com.
ဤသည်စာနယ်ဇင်းလွှတ်ရာမျှော်လင့်စွမ်းရည်နှင့်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ပြန်ချက်များအပါအဝင် 27 ၏ Securities မှအက်ဥပဒေပုဒ်မ 1933A နှင့် 21 ၏ Securities Exchange အက်ဥပဒေပုဒ်မ 1934E ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များ, ပါရှိသည် သဟဇာတ'' s ကိုElectraâ "¢, ProViewâ" ¢, ProMedia®ProStream® ACE အားတွေနဲ့®, Spectrumâ "¢, ChannelPortâ" ¢နှင့် သဟဇာတ MediaGrid ထုတ်ကုန်။ ဤအမှုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများရုပ်လုံးပေါ်လာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာအဖြစ်ထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်စွမ်းရည်အချို့ကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်အကျိုးခံစားခွင့်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုပေးမဖြစ်နိုင်ချေအပါအဝင်အန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှုများ, မှဘာသာရပ်များမှာမပေးစေခြင်းငှါ, ကုန်ကျစရိတ် ငွေစုနှင့်အံ့သြဖွယ်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး။
ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသောအဆိုပါရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးအပြည့်အဝမှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေကိုကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှဘာသာရပ်များမှာ သဟဇာတ'' s ကို Dec.10, 31 အဆုံးသတ်နှစ်အတွက် Form ကို 2012-K သည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအပါအဝင် Securities and Exchange Commission နှင့်အတူဖိုင်များ, ၎င်း၏လပတ် Form ကို 10-မေးနှင့်အ Form ကို 8-K သည်၎င်း၏လက်ရှိအစီရင်ခံစာများအပေါ်အစီရင်ခံစာများ။ ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှမရရှိနိုင်ပါသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံထားပါသည် သဟဇာတ ရက်စွဲ၏အဖြစ် hereof နှင့် သဟဇာတ မဆိုရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များကို update လုပ်ဖို့မဆိုတာဝန် disclaims ။
2014 NAB ပြရန် နှင့် multiscreen transcoding ဖြေရှင်းနည်းများ ATSC 3.0-အဆင်သင့် Electra ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ encoding မြားနှငျ့ Stream ထုတ်ယူခြင်း သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) IPTV ခေါင်းစီးများ လစာ-TV ကိုကုတ်ဖြည်သည့်အရာများ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တန်ဖိုးမြင့်သည်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖြန့်ဝေ ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံ 2014-02-27
ယခင်: အကြီးစား Venue သေနတ်ပစ်နဲ့ Lightweight Cabrio မှန်ဘီလူးသည် Fujifilm ရဲ့ 55X မှန်ဘီလူး NAB2014 ပွဲဦးထွက် Make
နောက်တစ်ခု: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဟာ 2014 NAB Show မှာမဆိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကိုဗီဒီယိုအရည်အသွေးပျအပေါ်အလေးပေး